new – Asia World
Home / Category : new
Apr9,2019	| new	| No Comment
ရန်ကုန် – မတ်လ ၂၆ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် – အေးရှားဝေါလ်ကုမ္ပဏီမှ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားသော ပြည်သူ့အကျိုးပြု အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် အေးရှားဝေါလ်ဖောင်ဒေးရှင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်း ကောင်းမွန်သော လူမှုအဖွဲ့အစည်း တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို စဉ်ဆက်မပြတ်လုပ်ဆောင်လျက်ရှိရာ တတိယအကြိမ်မြောက် “အေးရှားဝေါလ် ဖောင်ဒေးရှင်း” အသက် ၂၃ နှစ်အောက် အာရှအမျိုးသား ဘော်လီဘောပြိုင်ပွဲအား အေးရှားဝေါလ်ဖောင်ဒေးရှင်းနှင့်အ တူ အေးရှားဝေါလ်ကုမ္ပဏီခွဲများဖြစ်သည့် Yangon Aerodrome Company Limited (YACL) ၊ Pioneer Aerodrome Services (PAS) ၊ Global World Insurance (GWI) ၊ Horizon Lake View Resort နှင့် မြတ်တော်ဝင်ဟိုတယ်တို့မှ အဓိကပံ့ပိုးသူများအဖြစ် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်စွာ လက်ခံကျင်းပပေးနိုင်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
အေးရှားဝေါလ် ကုမ္ပဏီ မှ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားသော ပြည်သူ့အကျိုးပြု အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်သည့် အေးရှားဝေါလ် ဖောင်ဒေးရှင်းသည် UEHRD ၏ လမ်းညွှန်မှု နှင့်အညီ ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အငူမော် – မောင်တော လမ်းပိုင်းအဆင့်မြှင့်တင်ရေး စီမံကိန်းကို မည်သည့်အကျိူးအမြတ်မျှရယူခြင်းမရှိပဲ လှူဒါန်း ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ လမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ရေးသာမက အငူမော် – မောင်တော လမ်းတစ်လျှောက်မှ ဒေသခံပြည်သူများ၏ လူနေမှုဘ၀ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လိုအပ်ချက်များကိုလည်း ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
Dec 20 ,2018	| new	| No Comment
UEHRD ၏ လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ အေးရှားဝေါလ်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ ဖောက်လုပ်လှူဒါန်းလျက်ရှိသော အငူမော် – မောင်တောလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ရေးစီမံကိန်းကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပွင့်လင်းရာသီတွင် ပြန်လည်စတင်ဆောင်ရွက်နေ ပြီဖြစ်ပြီး ဒေသခံများ၏ စီမံကိန်းအပေါ် ခံယူချက်အတွေးအမြင်အချို့ကို တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
Asia World Foundation (AWF) has resumed its Angumaw – Maungtaw road development project starting from 2018 open season
UEHRD ၏ လမ်းညွှန်မှုနှင့်အညီ အေးရှားဝေါလ်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ ဖောက်လုပ်လှူဒါန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော အငူမော် – မောင်တော လမ်းအဆင့်မြင့်တင်ရေးစီမံကိန်းကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ပွင့်လင်းရာသီတွင် ပြန်လည်စတင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါသည်။
ပြန်လည်စတင်ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်သော အငူမော် – မောင်တောလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ရေးစီမံကိန်းပုံရိပ်များကို တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
Aug 25 ,2018	| new	| No Comment
Myanmar National Team advances to the second round at the Asian Games 2018 in Jakarta
မြန်မာ့လက်ရွေးစင်ဘော်လီဘောအသင်း၂၀၁၈ အာရှအားကစားပွဲတွင် နောက်တစ်ဆင့် သို့ တက်ရောက်သွားသည့်အတွက် ၀မ်းမြောက်ဂုဏ်ယူအပ်ပါသည်။
အေးရှားဝေါလ်ဖောင်ဒေးရှင်းသည် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရှိ ဂျကာတာမြို့ နှင့် ပါလန်ဘန်မြို့တို့တွင် ကျင်းပလျက်ရှိသော ၂၀၁၈ အာရှအားကစားပွဲတွင် သွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကစားလျက်ရှိသည့် မြန်မာအမျိုးသားလက်ရွေးစင်ဘော်လီဘောအသင်းကြီး အား ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်စွာဖြင့် အဓိက ကူညီပံ့ပိုးလျက်ရှိပါသည်။
Congratulations to our Myanmar Volleyball Team for advancing to the second round at The 2018 Asian Games.
Asia World Foundation is proud to be the main sponsor for the Myanmar National Team at the 2018 Asian Games in Jakarta/Palembang.
Download Myanmar Press Release here.
Aug 24 ,2018	| new	| No Comment
Myanmar National Team wins first opening match against Kazakhstan at the 2018 Asian Games
အေးရှားဝေါလ်ဖောင်ဒေးရှင်းသည် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရှိ ဂျကာတာမြို့ နှင့် ပါလန်ဘန်မြို့တို့တွင် ကျင်းပလျက်ရှိသော ၂၀၁၈ အာရှအားက စားပွဲတွင် သွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကစားလျက်ရှိသည့် မြန်မာအမျိုးသားလက်ရွေးစင်ဘော်လီဘောအသင်းကြီးအား ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်စွာ ဖြင့် အဓိက ကူညီပံ့ပိုးလျက်ရှိပါသည်။
မြန်မာ့လက်ရွေးစင်ဘောလီဘောအသင်း ပထမအဖွင့်ပွဲစဉ်တွင် ကာဇတ်စတန်အသင်းအား ၃-၁ ဖြင့် အနိုင်ရရှိခဲ့သဖြင့် ၀မ်းမြောက်ဂုဏ် ယူအပ်ပါသည်။
Asia World Foundation is proud to be the main sponsor for the Myanmar National Team at the 2018 Asian Games in Jakarta/Palembang. Congratulations to our Myanmar Volleyball Team for winning on the opening match.
Aug 15 ,2018	| new	| No Comment
Asia World Foundation provided charity services at No (6) Basic Education High School Ahlone from2-7 August 2018
အေးရှားဝေါလ်ကုမ္ပဏီမှ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားသော အေးရှားဝေါလ်ဖောင်ဒေးရှင်းသည် အလုံမြို့နယ် နှင်းဆီလမ်းရှိ အမှတ် (၆) အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းတွင် လိုအပ်သော ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများကို၂၀၁၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၂ ရက်နေ့မှ ၇ ရက်နေ့အထိ အင်တိုက်အားတိုက် သွားရောက်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။
အေးရှားဝေါလ်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ ကျောင်းအဆောက်အဦများ ဆေးသုတ်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်း၊ ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင် သာယာလှပစေရန် သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်း နှင့် သစ်ပင်ပန်းပင်များ စိုက်ပျိုးပေးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။
အေးရှားဝေါလ်ဖောင်ဒေးရှင်းအနေဖြင့် ယခုကဲ့သို့ အခြေခံပညာအဆင့် ကျောင်းသားကျောင်း သူများအတွက် ပညာရေးအထောက်အကူပြုလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်သည့် အတွက် အထူးပင် ဂုဏ်ယူမိပါသည်။
Asia World Foundation, the charitable arm of the Asia World group of companies, provided charity services at No (6) Basic Education High School Ahlone situated in Hninsi Road, Ahlone township from2-7 August 2018.
These included the painting and maintenance of school buildings, cleaning the surrounding of school compound and planting trees and flowers.
Asia World Foundation is proud to playarole in supporting the educational needs of basic education level students.
Aug9,2018	| new	| No Comment
Iran’s Khatam Ardakan takes top spot at this year’s SMM 2018 Asian Men’s Club Volleyball Championship
အေးရှားဝေါလ်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ အဓိက ကူညီပံ့ပိုးသူအဖြစ် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်စွာ လက်ခံကျင်းပပေးလျက်ရှိသည့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ အာရှကလပ် အမျိုးသားဘော်လီဘောပြိုင်ပွဲတွင် ကာတန်အာဒကန်အသင်း အီရန်မှ ပွဲစဉ် ၃ ခု ဆက်တိုက် အနိုင်ရရှိဗိုလ်စွဲခဲ့ပြီး ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ကမ္ဘာ့ကလပ် အမျိုးသား ဘော်လီဘောပြိုင်ပွဲသို့ တက်ရောက်ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။
အီရန်အသင်းနှင့် ကာဇက်စတန်အသင်းတို့ ဗိုလ်လုပွဲစဉ် ယှဉ်ပြိုင်ကစားကြပုံများကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
The SMM 2018 Asian Men’s Club Volleyball Championship, with Asia World Foundation as one of its main sponsors, has drawn toaclose yesterday with Iran’s Khatam Ardakan emerging as the champion within3straight games. With this win, the team automatically earnsaplace in the 2019 World Men’s Club Volleyball Championship.
Check out the photos from the final match between Iran and Kazakhstan.